Kitra - Fifanintsanan'ny CAN :: Mbola manana herijika ho tafita ihany ny Barea • AoRaha
Kitra – Fifanintsanan’ny CAN Mbola manana herijika ho tafita ihany ny Barea
Montsana tanteraka teo anatrehan’i Etiopia, tamin’ny isa 4 noho 0, ny Barean’i Madagasikara tamin’ny andro fahadimy amin’ny fifanintsanana hiadiana tapakilan’ny fiadiana ny amboaran’i Afrika na ny CAN 2021. Na izany aza, dia mbola tsy very ny fanantenana satria mbola azo atao tsara ny mitady hevitra hahatafita saingy miankina amin-javatra maro. Isan’ireny ny lalao farany hihaonan’i Etiopia sy Côte d’Ivoire amin’ ny 30 marsa ho avy izao. Na izany aza tsy azo ihodivirana ny tsy maintsy hitadiavan’ny Barean’i Madagasikara fandresena amin’i Nizera, lalao hotanterahina any Barikadimy, Toamasina, amin’ny 30 marsa 2021.
Raha ny filaharana eo amin’ny vondrona K misy antsika dia niakatra ho eo amin’ny laharana voalohany amin’ny isa sivy ny Waliya avy any Etiopia. Ny ekipan’i Côte d’Ivoire, manana isa fito sady mbola hihaona amin’i Nizera (26 marsa 2021), no eo amin’ny laharana faharoa. Nilatsaka ho any amin’ny laharana fahatelo i Madagasikara, manana isa fito.
Tranga mety hiseho ny fandresena azon’i Nizera manoloana an’i Côte d’Ivoire, izay tsy maintsy hitadiavan’ity farany hevitra handresena an’i Etiopia amin’ny fiafaran’ny lalaom-bondrona. Mety hampitsiry indray ny fanantenantsika izany satria tsy miala lavitra eo akaikin’ireo firenena mitana ny laharana roa voalohany amin’ny vondrona K isika.
Kisary mety hiseho ihany koa anefa ny fandresena azon’i Côte d’Ivoire ka mampatoky tena azy ireo. Mety tsy hiraharaha intsony ny lalao farany hihaonana amin’i Etiopia izy ireo saingy tsy azo hadinoina ihany koa fa tao amin’ny kianjan’i Bahir Dar no naharesy azy ireo tamin’ny isa 2 noho 1. Azo inoana anefa ny tsy maintsy hanavotan’ny Elefanta ny voninahiny any Abidjan, ka manatsara toerana antsika eo amin’ny filaharana farany.
Manana efatra andro hiomanana tsara sy hijerena izay tena mpilalao mendrika ny hifanandrina amin’i Nizera ireo teknisiana miaraka amin’i Nicolas Dupuis, mialoha ny lalao farany amin’ny vondrona K. Hiainga anio amin’ny alalan’ny fiaramanidina manokana, efa nofaina, ny delegasiona malagasy hihazo ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Ivato. Avy eo indray no miova zotra izy ireo hamonjena ny seranan’ Ambalamanasa, Toamasina, hamonjena ny lalao. Fandresena an’i Nizera fanindroany, taorian’ny efa nandavoantsika azy ireo tany Niamey tamin’ny isa 6 noho 2, no fara fanantenan’ny Malagasy hahafahana indray miatrika fanindroany ny dingan’ny famaranan’ny CAN, hotanterahina any Caméroun amin’ny taona 2022. “Miankina ihany koa amin’ny lalaon’i Etiopia sy Côte d’Ivoire ny fahatafitantsika”, hoy i Nicolas Dupuis taorian’ny lalao. “Tsy mitady fialana bala izahay hoe avo sady mafana ny toerana sy ny hoe tsy ampy ny mpilalao fa manana ny haavo teknika sady ekipa tsara i Etiopia. Mendrika azy ireo ny fandresena. Nanana tifitra telo ambin’ny folo izy ireo nanoloana ny mpiandry tsatokazonay. Efa nampoizinay fa ho sarotra ny lalao satria samy resin’i Etiopia teto avokoa i Nizera (3 – 0) sy Côte d’Ivoire (2 – 1)”, hoy hatrany ity mpanazatra ity.
Kitra – Fifanitsanan’ny CAN :: Avelan’ny kliobany hamonjy ny Barea i Romain Métanire
Fahafatesana filoha teo aloha :: Niezinezina ny fandevenana ny amiraly Ratsiraka Didier